सम्हालिन्छ कहिले मन - फिल्मी खबर - साप्ताहिक
सम्हालिन्छ कहिले मन
सुदर्शन थापाको निर्देशनमा चलचित्र ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ निर्माण हुने भएको छ । ए.बी. प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुने यो चलचित्रलाई अमितकुमार बस्नेत तथा अजितकुमार थापाले संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
हालै मात्र चलचित्रका लागि अभिनेत्री पूजा शर्माले १५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेको निर्माण पक्षले जानकारी गराएको छ । डेढ महिनापछि छायांकनमा जाने चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनमा अन्य दुई अभिनेता रहनेछन्, जसमध्ये अहिलेसम्म सोनम तोप्देन मात्र फाइनल भएका छन् ।
म्युजिकल लभ स्टोरी ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ का लागि अर्जुन पोखरेल, ताराप्रकाश लिम्बू तथा सुगम पोखरेलले संगीत दिएका छन् ।
घुमन्ते सन्दीपको पालो कहिले ?
पूजा र सुदर्शनको सम्हालिन्छ कहिले मन घोषणा
पूजा र आकाशको जोडी सम्हालिन्छ कहिले मनमा
हनिमुन कहिले ?
हाम्रो आँखा कहिले खुल्छलाई भारतीय अवार्ड
कप्सको सुन्दरी देखेर आँखा सन्कियो वैशाख ९, २०७६